Adobe XD dia havaozina amin'ny fomba lehibe amin'ny 'Stacks' sy ny vaovao hafa | Famoronana an-tserasera
Adobe XD dia nohavaozina miaraka amin'ny 'Stacks', Design Token, Scroll Groups ary maro hafa
Manuel Ramirez | | CSS, Fitaovana famolavolana, HTML, maro
Adobe XD dia nohavaozina miaraka amina endrika maromaro izay manasongadina fomba vaovao amin'ny famolavolana, prototyping ary fiaraha-miasa. Andian-dahatsoratra vaovao izay azo ampidirina ao amin'ny 'Stacks', mari-pamantarana endrika ary vondron-tsipika.
Nefa mbola betsaka ny zavatra tokony hatao ento amin'ny ambaratonga hafa ny famolavolana tranonkala avy amin'ity fampiharana lehibe antsoina hoe Adobe XD ity. Mamporisika anao izahay hahalala ny sasany amin'ny antsipiriany amin'ity kinova vaovao ity.
Manangona ireo vaovao ireo izahay amin'ny alalàn'ny fanavaozana hafa ao Photoshop, sary na mitovy Lightroom. Ny stack dia fomba fiasa vaovao miaraka amin'ireo vondrona sy singa. Afaka nataontsika manaova fitoviana amin'ny Flexbox amin'ny CSS, milaza fa ny Stacks dia tsanganana na andalana zavatra misy habaka apetraka eo anelanelany. Rehefa ampiana, esorina, haverina na havaozina ny zavatra ao amin'ny Stack, ny sasany amin'ireo zavatra manamboatra azy ho azy, mitazona io "habaka" io.
Rehefa noforonina io "stack" io, dia hitan'ny XD ny làlan-kalehany, na mitsangana na mitsivalana. Ny tanjon'ny stack dia azo atao fanitsiana mora kokoa amin'ny singa ao amin'ny UI toy ny karatra, dropdowns, browser ary modaly. Raha atao teny hafa, ny zavatra rehetra izao dia "miovaova" kokoa amin'ny XD rehefa mamolavola isika.
Mahazo izany ireo vondrona "Scroll" ny prototypes ataontsika dia tranonkala sy fampiharana amin'ny famokarana. Vaovao lehibe nangatahan'ny vondrom-piarahamonina XD ho an'ny fahana, lisitra, carousels, galeriana ary maro hafa. Topazo maso ilay horonan-tsary mba hahitana azy mivantana:
Isika koa dia manana ny mari-pamantarana famolavolana izay fomba vaovao hiara-miasa ho an'ny mpamorona sy ny mpamorona. Ny anarana manokana dia azo ampidirina amin'ny endrika toetrany sy ny lokony ao amin'ny tontonana fananana ary navoaka tao anaty CSS vonona hampidina. Andao lazaina fa ny mari-pamantarana famolavolana dia fomba mora entina handraisana fanapahan-kevitra amin'ny famolavolana endrika. Lahatsary iray hafa ho hitanao ny fomba fiasan'izy io:
Amin'ity fanavaozana vaovao manampy ity Adobe XD dia nanatsara ny fampidirana an'i Slack, rohy fizarana azo zahana sy sary an-tsary miaraka amin'ny Chart for XD,
Iray daholo fanavaozana tsara ho an'ny Adobe XD ary azonao sintonina izao mba hizaha toetra azy io sy hanatsarana ny fizotranao rehefa mandrafitra tranokala.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » HTML » Adobe XD dia nohavaozina miaraka amin'ny 'Stacks', Design Token, Scroll Groups ary maro hafa
Nohavaozina ny Adobe's Lightroom amin'ny fizarana fanovana, fanaraha-maso bebe kokoa amin'ny fanovana, sy maro hafa